Magaalada Dire-Daba oo la sheegay in maalintii labaad ay xiran yihiin goobaha ganacsiga… – Hagaag.com
Magaalada Dire-Daba oo la sheegay in maalintii labaad ay xiran yihiin goobaha ganacsiga…
Posted on 13 Febraayo 2018 by Admin in World // 0 Comments
Wararka ka imaanaya magaalada Dire -Daba ayaa sheegaya in maalintii labaad ay albaabada u xiran yihiin dhammaan goobaha ganacsiga, sidoo kalana waxaa cidlo ah jidadka magaalada isu socodkuna uu yaraaday.
Waxaa sidoo kale suuqa ku dhex jira dhalinyaro isku magacawday Qeeroo oo ah dhalinyarada rabshadaha wada, waxayna dhagax tuureen dukaan walba ama goobta ganacsiga ee furan.
Haddaba saakay ayaa magaalada Dire-Daba waxaa laga dareemayaa cabsi xooggan oo laga cabsi qabo inay sii kordhaan rabshaduhu, dadkuna saakay intooda badan guryahooda ayay iska joogaan, meheradaha iyo goobaha ganacsiguna way xidhan yihiin, sida bangiyada, xawaaladaha iyo dukaamada laga adeegto.
Rabshadihii u xoogganaa ayaa haatan waxay ka soconayaan gaar ahaan xaafadda Gande, iyo dhinaca Lagahare ka socda rasaas xooggan oo ay Askarta Booliska Fadaraalku ay ku ridayaan Rabshad wadayaasha oo hadda iyaguna billabay in ay taayaro gubaaan iyagoo Askartana dhagax ku tuurayo.
Rabshadahan ayaa socon doona ilaa dhowr maalmood oo dambe, sida ay ku goodinayaan dhalinyarada Qeeroo ee iyagu wada rabshadaha.
Qeeroo waa dhalinyaro Oromo ah oo kacdoonka wada waxayna si toos ah uga amarqaataan Jawhar Maxamed oo inta badan ah ninka Kacdoonada Itoobiya ka socda abaabula, wuxuuna ku nool yahay dalka Mareykanka.